Xoogaga ISIS Oo Boqolaal Askari Ku Dilay Duleedka Magaalada Tikriit.
Saturday June 28, 2014 - 13:09:41 in Wararka by Super Admin
(Rating 3.2/5 Stars) Total Votes: 11
Xukuumadda Dabadhilifka Nuuri Al-maaliki ee wadanka Ciraaq ayaa ku dhawaaqday howlgal ay ku doonayso in ay dib ugusoo ceshato magaalo istiraatiiji ah oo maalmo ka hor lagala wareegay.
Xoogaga ISIS Ee Ciraaq isku fidinaya
Kumanaan katirsan ciidanka melleteriga Xukuumadda Baqdaad oo ay taageerayaan maleeshiyaad shiico mutadawiciin ah ayaa kasoo dhaqaaqay magaalada Samaraa waxayna isku dayeen in ay qabtaan wadada aadda dhanka magaalada Tikriit.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in dagaal saacado badan qaatay kadib ay ciidamada mujaahidiinta dowladda Islaamiga ah (ISIS) ugu suurtagashay in ay iska caabiyaan weerarka lagusoo qaaday.
Saraakiil katirsan Dowladda Islaamiga ah waxay sheegeen in ay cagta mariyeen kolonyo gaadiid ah oo isku dayayay in ay gudaha ugalaan magaalada Tikreet oo gacanta muslimiinta sunniga ah kujirta.
Shabakad soo tebisa kacdoonka sunniga Ciraaq ayaa xaqiijisay in laburburiyay 8 gaadiidka gaashaaman ah islamarkaana la hareereeyay cutubyo ciidanka Ciraaq katirsan waxaana lafilayaa in ciidamadaasi ay dhanka mujaahidiinta isku dhiibaan.
Waa isku daygii ugu horreeyay oo xukuumadda Al Maaliki ay ku doonayso in ay dib ugusoo ceshato magaalooyin ay mujaahidiinta ISIS ka qabsadeen horraantii bishan June 2014.